Global Voices teny Malagasy » Rosiana Retirety Nonina Tao Anaty Trano Tondra-drano (Rano Mangatsiaka Hatreny Andohalika) Nandritra Ny Dimy Taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Aogositra 2016 7:32 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Voina, Akon'ny RuNet
Sary: YouTube / News.ykt.ru, namboarin'ny RuNet Echo.
Lehilahy iray 71 taona efa misotro ronono no nonina tao anaty trano tondraky ny rano tao Yakutsk nandritra izay dimy taona lasa izay. Mainty sy mivaingana mangatsiaka ny rano, izay efa mila hahatratra ny lohaliny. Na amin'ny fahavaratra aza, rehefa somary mafana ny andro ao an-tanàna, mbola mangatsiaka ny rano tondraka. Nilaza i Valery Tereshchenko, ilay lehilahy monina ao anatin'ity “honahona” ity, araka ny fiantsony azy fa matory miaraka amin'ny kiraro baotiny sy akanjo ba matevina izy mba hiaro ny tenany amin'ny hatsiaka.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nihaona tamin'i Tereshchenko ny mpitati-baovao avy ao amin'ny vavahadim-baovao ao an-toerana Ykt.Ru , Maria Alexeeva, nasain'i Tereshchenko nitety ny tranony izay feno rano atsasany nandritra ny dimy taona lasa izy. Nasainy nanao baoty manokana tsy tantera-drano izy talohan'ny nidirana tao anatiny. “Tandremo indrindra ny mianjera,” hoy izy nampitandrina azy. “Somary lalina eny amin'ny faritra sasany, ary mangatsiaka toy ny ranomandry ny rano.”
Niasa ho mpamily i Tereshchenko nandritra ny 15 taona ary avy eo mpanamboatra fiara tamin'ny orinasa fanatobiana maotera ao an-toerana. Naorina tamin'ny taona 1970 ny trano izay onenany amin'izao fotoana izao. Nifindra tao i Tereshchenko raha mbola vaovao ny trano, tonga voalohany tao Yakutsk tamin'ny 1969 avy any Irkutsk izy. Niara-nipetraka tamin'ny vadiny, Nina izy, efa maty roa taona lasa ny vadiny raha nianjera noho ny aretim-po ary nilentika tao anaty rano izay mbola manondraka ny tranon'izy ireo hatramin'izao. Tsy dia tsara ihany koa ny fahasalaman'i Tereshchenko. Nilaza i Alexeeva fa mikohaka izy matetika rehefa mandeha.
Nilaza i Tereshchenko fa mando hatrany ny fanakany rehetra. “Lena ny farafara izay atoriako”, hoy izy nanazava, nilaza izy fa miezaka ho eny ivelan'ny trano izy haka hafanana, na dia mahatonga izany ho asa goavana aza ny fahanterany sy ny olana ara-pisefoana mahazo azy.
Lalina kokoa noho ny hafa ny “honahona” ao amin'ny faritra sasany ao anaty trano. Rehefa mandeha manodidina ny trano, mandrefy ny halalin'ny rano amin'ny toerana samihafa i Tereshchenko: 17 santimetatra (mihoatra ny 6 iches) ny fitoerana iray, ary 25 santimetatra be izao (efa ho 10 inches) ny hafa. “Aza mankeo akaikin'ny varavarankely fotsiny,” hoy izy, nohazavainy fa efa niendaka nilatsaka any amin'ny farany ambany ny gorodona, izay 1,5 metatra ny halaliny. Mba hampisehoana ny loza, mandetika kifafa ao anatin'ny fotaka izy, ary manjavona avokoa hatramin'ny tahony izany.
Nanomboka tondraky ny rano ny trano dimy taona lasa izay, vokatry ny fanorenana trano sy fivarotana teo akaiky teo. Nanomboka tamin'izany, miangona ao amin'ny tranon'i Tereshchenko ny rano maloton'ireo trano vaovao ireo.
Iray tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina amin'i Tereshchenko no nifandray tamin'ny News.Ykt.Ru, manantena fa hanosika ny fiadidiana ny tanàna hanampy ity lahy antitra ity ny fandrakofam-baovao ao an-toerana momba azy. Navitrika tao amin'ny media sosialy ihany koa ity mpifanolo-bodirindrina ity, miezaka manangona fanohanana.
Efa imbetsaka izy no niantso ny manampahefam-paritra, saingy tsy mety mahazo fihaonana mivantana amin'i Aisen Nikolaev, ben'ny tanàna eo an-toerana. Nilaza i Tereshchenko fa tahaka izany ihany koa no mahazo azy isaky ny miantso fanampiana izy: tsy misy trano hafa azo ipetrahana amin'izao fotoana izao. Nandoa vola tamin'ny orinasa mpitroka rano mba hanala ny tondra-drano – vahaolana vonjimaika izy taloha. Nilaza izy fa tsy manam-bola andoavana izany intsony ankehitriny. Milaza ny manam-pahefana ao an-toerana fa tsy manana fitaovana fitrohana rano intsony izy ireo. “Maninona raha mandeha mitaraina any amin'i Barack Obama ianao,” hoy izy ireo taminy indray mandeha.
Nilaza tamin'ny News.Ykt.Ru i Vitaly Sorochan, manampahefam-panjakana ao an-toerana fa hanadihady ny toe-draharaha ary handray ny fepetra rehetra ilaina, na dia nilaza aza izy fa tsy maintsy miantso ny manampahefana aloha i Tereshchenko tenany “ary mitondra ny antontan-taratasy ilaina rehetra.” Nampanantena hamaha ny olan'i Tereshchenko ihany koa i Igor Tkachenko, manam-pahefana misahana ny tranom-ponenana, na dia nilaza tamin'ny News.Ykt.Ru aza izy fa tsy misoratra anarana araka ny tokony izy ny olona sasany monina ao amin'ny manodidina ao.
Tamin'ny taon-dasa, nitsidika an'i Tereshchenko tao an-tranony ireo manampahefana avy ao amin'ny sampan-draharahan'ny trano fonenana. Nijery ny manodidina izy ireo ary nilaza taminy fa: “Tsy afaka miaina toy izao ianao, dadabe.” Nilaza izy fa nampanantena hitady trano vaovao ho azy izy ireo, na dia efitra iray fotsiny ao anaty trano aza, saingy mbola tsy nisy niantso izy hatramin'izao.
Ankehitriny, tsy misy ny antso ho an'i Valery Tereshchenko; nilatsaka tao anaty rano vao haingana ny findainy, ary very tsy hita intsony izany.
Raha hijery ny tatitra feno sy ny sary nalain'i Maria Alexeeva, jereo ato  ny tranonkalan'ny News.Ykt.Ru.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/22/86811/
 mpitati-baovao avy ao amin'ny vavahadim-baovao ao an-toerana Ykt.Ru: http://news.ykt.ru/article/46261